Ny fomba hanombohana an'i Hamachi
Ny programa Hamachi dia fitaovana goavana amin'ny fananganana tambajotra virtoaly. Ankoatr'izany, misy asa maro mahasoa hafa, ao amin'ny fampivoarana ity lahatsoratra ity hanampy anao. Fametrahana ny programa Alohan'ny hilalao miaraka amin'ny namana iray ao hamachi, mila mandefa ny fonosana fametrahana. Download Hamachi avy amin'ny tranonkala ofisialy Aty amin'izay fotoana izay, tsara kokoa ny mandeha mankany amin'ny tranonkala ofisialy ary misoratra anarana.
Ahoana ny fametrahana ny boribory manga ao Hamachi
Raha misy boribory manga eo akaikin'ny solon'ilay mpilalao baolina any Hamachi, dia tsy tonga lafatra. Porofo izany fa tsy azo natao ny namorona tionelina mivantana, ny solosaina iray hafa dia ampiasaina amin'ny fampitaovana amin'ny angona, ary ny ping (fikolokoloana) dia hamela zavatra betsaka. Inona no tokony hatao amin'ity tranga ity?
Mamorona tambajotra vaovao ao amin'ny programa Hamachi
Ny programa Hamachi dia mamolavola tambajotra ao an-toerana, izay ahafahanao milalao ny lalao amin'ny mpanohitra maro ary mifanakalo angona. Mba hanombohana, mila mametraka fifandraisana amin'ny tambazotra efa misy ianao amin'ny alalan'ny server Hamachi. Noho izany dia mila mahafantatra ny anarany sy ny tenimiafinao ianao. Amin'ny ankapobeny dia azo jerena ao amin'ny forums, tranonkala, sns ...
Fomba hamongorana tanteraka an'i Hamachi
Matetika dia matetika ny fanesorana ny ordinatera na ny fifandraisana dia tsy manala tanteraka an'i Hamachi. Amin'ity tranga ity, rehefa miezaka mametraka ny dikan-dikan-drakitra vao haingana, mety misy ny fahadisoana mety hipoitra ny dikan-ny taloha, misy olana hafa amin'ny data sy ny fifandraisana efa misy. Ity lahatsoratra ity dia hanolotra fomba mahomby maromaro hanampy anao hamongotra tanteraka an'i Hamachi, na maniry izany na tsia ny programa.
Fametrahana ny programa Hamachi ho an'ny lalao an-tserasera
Ny Hamachi dia fampiharana ampiasaina amin'ny fananganana tambajotram-panjakan'ny faritra amin'ny alàlan'ny Internet, omena amin'ny interface tsotra sy ny maromaro. Raha te hilalao amin'ny tambajotra ianao, dia mila mahafantatra ny ID, ny tenimiafinao hiditra ary mametraka fiketrehana voalohany izay hanampy amin'ny fiarovana amin'ny fomba maharitra amin'ny ho avy.
Famahana ny olana amin'ny fampifandraisana an'i Hamachi amin'ny adapety ho an'ny tambajotra
Hamachi - rindrambaiko manokana izay mamela anao hanangana tambajotra azo antoka amin'ny alalan'ny Internet. Mpilalao maro no mandefa ny programa amin'ny milalao Minecraft, Counter Strike, sns. Na eo aza ny fahatsoran'ny fanovana, indraindray ny fampiharana dia manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny tambajotra adapter, izay voafehifehy haingana, saingy mitaky ny asa ataon'ny mpampiasa.
Ahoana ny fisoratana anarana amin'i Hamachi raha misy fahadisoana?
Noho izany, manomboka voalohany an'i Hamachi ianao ary efa miezaka mifandray amin'ny tambajotra misy mpilalao, fa misy fahadisoana momba ny tsy fahafahan'ny fifandraisana amin'ny serivisy LogMeIn. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny antsipiriany rehetra momba ny fisoratana anarana. Fanaovana sonia 1. Ny fanoratana dia mora indrindra hamitana ny tranonkala ofisialin'ny programa.
Mamorona mpilalao lalao ordinatera amin'ny alalan'ny programa Hamachi
Ny lalao an-tserasera rehetra dia tsy maintsy manana serivisy ahafahan'ny mpampiasa hifandray. Raha tianao, dia afaka milalao ny anjara andraikitry ny solosaina lehibe ianao amin'ny alalan'io fampiharana io. Misy fandaharan'asam-pandaharana maro hananganana toy izany, saingy anio dia hifidy an'i Hamachi isika, izay mampifanaraka ny fahatsorana sy ny fahafahana mampiasa maimaim-poana.
Inona no tokony hatao raha tsy manomboka i Hamachi, fa miseho amin'ny endrika diagnostika ny tenany
Olona maro no miatrika olana toy izany rehefa miezaka ny manomboka ela be ny programa, ary avy eo dia mamely tena i Hamachi, izay tsy mitondra na inona na inona mahasoa. Ny vahaolana dia hahagaga anao amin'ny fahatsorany! Noho izany, manana varavarankelin'ny famandrihana ianao, ny olana lehibe indrindra dia ny hoe "Toe-panompoana: tovana".
Hamachi: mamaha ny olana amin'ny tonelina
Ity tranga ity dia miteraka matetika ary mampanantena vokatra ratsy - tsy azo atao ny mifandray amin'ny mpikambana hafa ao amin'ny tambajotra. Mety misy antony vitsivitsy: ny fanoritsoritana diso ny tambajotra, ny client or programa fiarovana. Andao hizaha daholo ny zavatra rehetra. Koa, inona no tokony hatao rehefa misy olana amin'ny tontolon'i Hamachi?
Fampitomboana ny isan'ny kilasin'ny fandaharana Hamachi
Ny dikan-teny malalaka amin'ny Hamachi dia ahafahanao mamorona tambajotra ao an-toerana miaraka amin'ny fahafahana mifandray amin'ny mpanjifany 5 miaraka. Raha ilaina, dia mety hampitombo ny isan'ny mpandray anjara amin'ny mpandray anjara 32 na 256. Mba hanaovana izany, mila mividy famandrihana amin'ny mpanohitra marobe ny mpampiasa. Andeha hojerentsika ny fomba nanaovana izany. Ahoana no hampitomboana ny isan'ny faritra ao Hamachi 1.
https://termotools.com mg.termotools.com © Hamachi 2019